Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha Codsiga Wershadaha Caafimaadka ee Jumlada | Saxnimada QY
CODSIGA WARSHADA CAAFIMAADKA
Qalabka biraha caafimaadka
Sababo la xiriira gaar ahaan deegaanka la isticmaalo iyo sifooyinka loo baahan yahay ee qalabka caafimaadka, waxaa jira heerar adag xulashada qalabka biraha caafimaadka.
Marka hore, birtu waa inay noqotaa mid si fudud loo samayn karo, male-malahana waa ay adag tahay si ay u fududaato qaabaynta, laakiin maaha mid aad u xoog badan, sababtoo ah marka qalabka qalliinka la sameeyo, wuxuu u baahan yahay inuu ilaaliyo qaabkiisa oo uusan si fudud u beddelin. Iyadoo ku xiran nooca qalabka, isticmaalka birta ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay noqdaan kuwo si fudud u jilicsan, sababtoo ah qalabyo badan oo qalliin ayaa u baahan inay noqdaan kuwo dheer oo dhuuban qaab ahaan, sida maqaarka maqaarka, dhejisyada, maqasyada, iwm.
Marka labaad, Dusha sare ee birta ee qalabka qalliinka waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo adag oo dhalaalaya, si qalabku u sahlanaado in la nadiifiyo, ma qarin doono bakteeriyada, oo si wax ku ool ah uga hortagto caabuqyada boogaha bini'aadamka.
Ugu dambeyntii, Birtu waxa ay u baahan tahay in aanay si kiimiko ah ula falcelin unugyada bini’aadamka, si aanay biraha wasakhayn ugu keenin jidhka bini’aadamka inta lagu jiro qaliinka.
Metal kee u fiican Qalabka Caafimaadka?
Biraha ugu badan ee loo isticmaalo qalabyada qalliinka waa: birta aan la taaban karin, titanium, tantalum, platinum, iyo palladium.
Birta aan la taaban karin waa mid ka mid ah biraha inta badan loo isticmaalo samaynta qalabka qalliinka.
Austenitic 316 (AISI 316L) birta waa bir aan caadi ahayn oo la isticmaalo waxaana loo yaqaan "birta qalliinka". Sababtoo ah waa bir adag oo aad u adkaysata daxalka. AISI 301 waa birta inta badan loo isticmaalo ilaha wax soo saarka waxaana loo isticmaali karaa qalabka caafimaadka. Birta aan birta lahayn waxay u adkeysan kartaa heerkulka sare ilaa 400 ° C, taas oo macnaheedu yahay in si fudud loogu jeermi karo autoclave at 180 ° C. Waxa kale oo ay leedahay faa'iidooyinka adkaanta iyo xidhashada iska caabin ku dhow u dhigma ka birta kaarboon. Biraha birta ah ayaa had iyo jeer ahaa walxaha doorashada ee birta, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo kale marka loo baahdo.
Titanium waa ka kulaylka adkeysi badan u leh birta aan birta lahayn waxayna u adkeysan kartaa heerkul sare oo ah 430°C. Marka la kululeeyo oo la qaboojiyo, balaadhinteedu iyo foorarkeedu way yar yihiin. Alloy Titanium waxa kaliya oo la bilaabay in loo isticmaalo walxo qalabka qalliinka 1960kii. Alloy Titanium waxa uu leeyahay bioocompatibility wanaagsan iyo modules laastikada ugu dhow lafaha dabiiciga ah ee bini'aadamka, iyo iska caabin aad u fiican, iska caabin daxalka iyo qaabaynta. Sidaa darteed, daawaynta titanium waa mid ka mid ah alaabta biomedical ee ugu rajo-gelinta badan waxayna aad ugu habboon tahay qalliinka Qalabka iyo rakibidda. Faa'iidada ugu cad ee titanium waa xooggeeda sare. Awoodeeda adkaysigu waxa ay la mid tahay birta kaarboonka, waana 100% adkaysi u leh daxalka, laakiin way ka fudud tahay birta daxalka, waxaanay 40% ka fudud tahay isla mugga. Titanium waxa ay noqotay birta la doortay ee ulaha lafaha, irbadaha, taarikada iyo galinta ilkaha. Titanium alloy 6AL-4V waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarista kala goysyada miskaha, boolal lafaha, kala goysyada jilibka, taarikada lafaha, implants ilkaha, iyo qaybaha isku xirka laf dhabarta
QY Precision waxa uu khibrad buuxda u leeyahay habaynta SS iyo Ti alloy alaabta, soo dhawoow nala soo xidhiidh si aad u hesho xigasho ku salaysan sawiradaada.
Warshadaha aaladaha caafimaadku waxay kaga duwan yihiin warshadaha kale ee farsamaynta farsamada saddex qodob oo waaweyn:
Marka hore, Shuruudaha qalabka mashiinada ayaa aad u sarreeya. Qalabka caafimaad ee horumarsan ee lagu farsameeyo sida suufka iswiiskushka ah, qalabka mishiinada-spindle-ka badan iyo miisaska wareega ayaa gabi ahaanba ka duwan xarumaha mishiinada iyo suufka caadiga ah. Aad bay u yar yihiin cabbir ahaan aad bayna u cufan yihiin qaab dhismeedkooda.
Labaad, waxay u baahan tahay hawlkarnimo sare. Qalabka iyo qalabka caafimaadka, waxa ugu muhiimsan waa hufnaanta farsamaynta, ama waxaanu nidhaahnaa wareegga wax-qabadka.
Saddexaad, marka la eego workpiece laftiisa, aad ayuu uga duwan yahay qaybaha kale ee farsamada. Aaladaha caafimaad ee lagu dhex geliyo jidhka bini'aadamka waxay u baahan yihiin dhammaystir dusha sare ah oo aad u wanaagsan, sax ah oo aad u sarreeya, oo aan lahayn wax leexleexan.
QY Precision waxay khibrad buuxda u leedahay habaynta qalabka caafimaadka, soo dhawoow noo soo dir sawiradaada naqshadaynta si aad u soo xigasho.
Hore: Socodka gaarka ah
Xiga: Codsiga Warshadaha Warshadaha
Qaybaha Caagagga Caafimaadka